နေထိုင်မှုပုံစံ Archives - Page5of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဆောင်းရာသီမှာ ရေအေးနဲ့ချိုးကြမလား? ရေနွေးနဲ့ချိုးကြမလား? ဆောင်းဝင်နေပြီဆိုတော့…..ဒီအကြောင်းအရာလေးကို လူအတော်များများ စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သိတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်ဆောင်းက နေ့ခင်းဘက်တွေ ပူသလိုရှိပေမယ့်လို့….အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ရေချိုးချိန်ဖြစ်တဲ့ မနက်အစောပိုင်းနဲ့ ညနေ/ညပိုင်းတွေတော့ အချမ်းပိုလှပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးပြောလိုတာကတော့ ဒီနေရာမှာ သုံးနှုန်းတဲ့ “ရေအေး” ဆိုတာ….ပုံမှန်ချိုးနေကြရေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး……”ရေနွေး”ဆိုတာကတော့ …..ခပ်နွေးနွေးရေကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။(ရေအေးကို ရေခဲရေ၊ ရေနွေးကို…
ကောင်းကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားများ နှင့် အစာမျှဉ်များ Prebiotics နဲ့ probiotics ဆိုတာတွေဟာ ယနေ့ခေတ် အစာအာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွေမှာ လူပြောများတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အတူတူ ခပ်ဆင်ဆင်လို့ထင်ရသော်လည်း တကယ်တမ်း လေ့လာကြည့်လျှင် နှစ်မျိုးစလုံးဟာ မတူညီတဲ့ နေရာကနေ ကျန်းမာရေးကို…
ခဏလေးနဲ့ ပိန်ချင်တာလား ha ha ပဲ ရမယ် ဟာ ဒီ ဆရာမတော့ ရန်စပြီလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ လွဲနေတာလေးတွေကို စေတနာနဲ့ ပြောပြချင်လို့ပါ။ ကိုယ်တိုင်က မဝပေမယ့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာ ဝတဲ့သူတွေရှိတော့ ဝတဲ့သူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ…
အလုပ်နဲ့ ကျန်းမာရေး မညီမျှမှု ယခုခေတ် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ လူအများစု အလုပ်ချိန်တွေများကာ အလုပ်ရဲ့ ဖိစီးမှုဒဏ်တွေ ခံကြရပါတယ်။ အလုပ်ကို ဦးစားပေးလုပ်လာကြတဲ့အခါ အရေးကြီးတဲ့ မိသားစုဘဝ၊ အနားယူအပန်းဖြေအချိန်တွေ၊ လူမှုရေးစတဲ့ အရာတွေမှာလည်း ချို့ယွင်းလာပြီး အိပ်ချိန်လည်းလျော့နည်းလာပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အလုပ်နဲ့ လူနေမှုဘဝမျှတမှုမရှိတဲ့အခါ…
အိပ်ချင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေမယ့် ၄-၇-၈ နည်းလမ်း လူအတော်များများဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မျက်စိကြောင်တာကြောင့်ဖြစ်စေ အိပ်မရတာကိုကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုအိပ်မရတဲ့ညတွေ နည်းသွားစေဖို့အတွက် ၄-၇-၈ ဆိုတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒီနည်းလမ်းကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အရီဇိုးနားတက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာ အင်ဒရူး ဝေးလ် ဆိုသူကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အိပ်စက်ခြင်းကိုအထူးပြုလေ့လာနေတဲ့ပါရဂူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လူနာတွေကို…